Warbixintii ugu danbeysa COVID19 Itoobiya, 11 qof oo ka yimid jigjiga oo laga helay Xanuunka – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Warbixintii ugu danbeysa COVID19 Itoobiya, 11 qof oo ka yimid jigjiga oo...
Warbixintii ugu danbeysa COVID19 Itoobiya, 11 qof oo ka yimid jigjiga oo laga helay Xanuunka
Warbixinta ugu dambeysa ee COVID19 Ethiopia maanta waxaa laga helay Sagaal iyo toban (19) dad dheeraad ah, waxaana laga baaray cudurka # COVID19 24kii saac ee la soo dhaafay marka la eego wadarta 4, 044 tijaabooyinka shaybaarka ee laga soo qaaday xubnaha bulshada khatarta sare leh; ku soo laabatay xarumaha kaaritiinka ah; adoo adeegsanaya raad raac taabasho; booqashada bukaanjiifka xarumaha caafimaadka iyo xarumaha karantiilka / daaweynta.
Natiijooyinka maanta waxay wadarta guud ee la xaqiijiyay # ee #Ethiopia ka dhigaysa 306.
Hal bukaan ayaa sidoo kale soo kabsaday, taasoo keentay wadarta bukaannada la soo kabsaday # ilaa 113. Ma jiraan wax bukaan ah oo ku jira #ICU.
19, 15 waa rag halka 4 ay yihiin haween; dhammaantood waa Itoobiyaan da’doodu u dhaxayso 15 ilaa 55.
Laba ka mid ah kiisaska waxay ka yimaadeen #AddisAbeba labana waxay ka yimaadeen #Ginchi magaalada, #Dendi wereda oo ku taal galbeedka Showa aagga gobolka Oromada (Afartaan kiis ayaa lagayaabaa inay bulshada u gudbiyaan maaddaama meelaha gaarka ah ee bukaannada aan lagu cadeyn warbixinta.)
Fiiro gaar ah Tani waxay sidoo kale ahayd warbixintii ugu horraysay ee ka timaadda deegaanka Ginchi. Saddex ayaa ka soo jeeda gobolka Tigreega #Maykedera iyo #SititHumera xarumaha karantiimada. Mid wuxuu ka yimid gobolka Amxaarada #Metema karantiil xarunta. 11 ka mid ahna waxay ka yimaadeen #Jigjiga xarunta karantiil ee gobolka #Somali.
Shan iyo toban (15) ka mid ah waxay leeyihiin taariikh safar oo dibedda ah; laba waxay leeyihiin raad raac taabasho, halka labada kalena aysan lahayn taariikh safar, midna raad raac xiriir lama yaqaan.
Previous articleEreteriya waa Dalka kaliya ee Afrikaanka ah ee aan laheyn kiis COVID-19
Next articleMadaxweyne Kenyatta ayaa kordhiyay bandoowga guud ahaan Kenya,